Le logo ye-2024 yeeOlimpiki zaseParis | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Idangatye leOlimpiki kwii-Olimpiki ezingama-2024 ezizayo eParis mhlawumbi ilogo iye yaqhekeza ngaphezulu kwesi siganeko sibalulekileyo kwihlabathi lezemidlalo.
Kwimpawu eboniswe iOlimpiki phantse kwiminyaka emi-4Ukusetyenziswa kwelangatye kuyilo lwayo kushiye igumbi elininzi kakhulu lokugxeka kunye nokugculela ukuvela kwinethiwekhi yenethiwekhi.
Phantse njengaleyo, Ngaba yindawo yokwenza izinto ngobuhle? Isibhengezo sesicwangcisi? Kwaye ke ii-tweets ezineziganeko ezimnandi ziqale ukuna. Kwaye kuyinyani ukuba xa ujonga ilogo yedangatye, unokufumana imilebe, inwele enkulu yesiFrentshi; Oko akuthethi ukuba le yayiyinjongo yefemi kwikomkhulu laseParis, kodwa badlulile.
Le logo des Jeux IiOlimpiki? ye # IParis2024 yi là! pic.twitter.com/092gZjExL0
-Umdlalo we-tv wase-France (@francetvsport) Oktobha 21, 2019
Uyilo lwegolide lumalunga "ne-Art Deco" kunye nesimbo seParis yayilixesha lokugqibela lendawo ye-Olimpiki. Sithetha ngonyaka we-1924 kwaye unokuqonda kancinci ngakumbi ukuba kutheni le nto ibuyela kwisitayile esingathandabuzekiyo.
IiSimpson ziqikelela ilogo ye # IParis2024 pic.twitter.com/0KI20XcQ0W
-Simpsonito (@SimpsonitoMX) Oktobha 22, 2019
Enye yeenkcukacha zentengiso yelogo yeyokuqala izakukhonza zombini iiOlimpiki kunye neeParalympics. Iwebhusayithi yelogo isebenzisa la magama ukumela iziqingatha ezibini zeprojekthi enye, efuziselwa ngumfuziselo omnye kunye nokwabelana ngombono ofanayo wokuba umdlalo utshintsha ubomi.
Iirwithi zophindaphindo ziye zaya yonke indawo. Sine ubone ukufana kwilangatye leTinder, ethandwayo ukuthandana app. Okanye indlela idangatye elibukeka ngayo phantse njengeenwele ezinxitywe nguLisa Simpson. Oko kukuthi, kukho uthelekiso oluninzi kwaye asazi ukuba eyona nto ubufuna ukuyijonga yile. Ukuba ilogo entsha yee-Olimpiki ezingama-2024 zaseParis yasasazeka ngokukhawuleza; asilibali Yonke into eyenzekileyo nge logo yeTokyo 2020.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » I-logo entsha yee-Olimpiki ezingama-2024 eParis embindini wentlekisa
Uyenza njani loo miQokelelo yaBantu abaQokelelayo ukuba ibonakale iphila ngu hot.kenobi